समृद्ध, भ्रष्टाचारमुक्त, महिला हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउछौं: रावल « Anumodan National Daily
समृद्ध, भ्रष्टाचारमुक्त, महिला हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउछौं: रावल
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०९:२७
टीकापुर नपा प्रमुख पदको उम्मेदवार
नेकपा (एमाले) टीकापुरले टीकापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवारमा नेता तपेन्द्र रावललाई अघि सारेको छ । २०३० साल बैशाख २४ मा अछाम जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउपालिका-५ मा सुगालीमा जन्मेका रावलको प्राथमिक शिक्षा अछाममै र कक्षा छ देखि आइएसम्मको अध्ययन भारतको महाराष्ट्रमा भएको हो । स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययन काठमाडौंमा पूरा गरेका हुन् । २०४९ सालमा अनेरास्ववियू अछाम-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको सचिव र विश्वविद्यालय विभागीय कमिटीको सदस्य हुँदै २०५५ सालमा नेकपा (एमाले) टीकापुर नगरकमिटी सदस्य र त्यसपछि दुई कार्यकाल पार्टीको नगर सचिव, जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै हाल प्रदेश खेलकूद विभाग सदस्य हुनुहुन्छ ।
टीकापुरमा रेडक्रस, जेसीज जस्ता सामाजिक संस्थामा संलग्न हुँदै सामुदायिक पुस्तकालयका संस्थापक सदस्य, जनजागृति मावि टीकापुर, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी सदस्य, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन सदस्य रहि कार्याअनुभव गरिसक्नु भएको छ । हाल नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयको अध्यक्ष, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस सल्लाहकार सभा संयोजक रहनु भएको छ । प्रष्ट विचार, खरो स्वभावका युवा नेता रावल विकासका लागि समाजका हरेक वर्गको उत्थान र सबै पक्ष सशक्त हुनुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ । भारतको आर्थिक राजधानी बम्बईको अनुभव र उच्च शिक्षाका क्रममा काठमाडौं बसाईका क्रममा पार्टी नेतृत्वसंगको बसाई र लामो समय टीकापुरमा राजनीतिक सक्रियता र बसाई क्रममा यहाँका समस्या र संभावनाका बारेमा नजिकबाट नियालेका नेता रावलसंग निर्वाचन र रावलको उम्मेदवारीमा केन्द्रित हुँदै गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
– तपाईको उम्मेदवारी किन ?
टीकापुर देशमै चिनिएको शहर हो । राम्रो योजना भएको व्यवस्थित शहर हो । यस नगरको समृद्धि, नगरवासीको समृद्धिका लागि झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार म चुनावी मैदानमा छु ।
ड्ड टीकापुर नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) अरु पार्टी भन्दा के फरक छ र यसलाई जनताले किन भोट दिनुपर्ने ?
हामी सबैभन्दा पहिले मतदाता माझ गयौं । हाम्रा एजेण्डा पहिलै प्रस्तुत गर्‍यौं । यहाँका नागरिकले टीकापुरमा स्वच्छ छविको मान्छे खोजिरहेका छन् । टीकापुरलाई नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढाउने नेतृत्व चाहिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार छान्दा सर्वसममत निर्णय गर्‍यो । हाम्रा प्रचारमा यस नगरका पूर्व मेयर, उपमेयर लागि रहनु भएको छ । पार्टी कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरू खटिरहेका छन् । हाम्रो पार्टी जनतामा लोकप्रिय छ । नेकपा (एमाले)लाई जनताले माया गरिहेका छन् । हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टीले महिनौसम्म उम्मेदवार नै छान्न सकेन । त्यसैले हामीलाई जनताले भोट दिन्छन् ।
सद्भावसहितको समृद्ध टीकापुर एमालेको परिकल्पना
उम्मेदवारको स्वच्छता, लगाव, उर्जा हेरेर मूल्यांकन गर्नुहोला
सबैलाई मत दिइसक्यौं यसपटक एमालेलाई सेवाको अवसर दिनुहोस
– आम मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी तपाईको पार्टीका योजना के योजना दिनुभएको छ ?
टीकापुर मिश्रित बसोबास भएको ठाउँ हो । यहाँ जातीय कुरा उठिरहेका छन् । जात, धर्मका नाममा संसारमा राम्रो कतै भएको छैन । यसलाई चिर्दै टीकापुरमा सबै मिलेर लाग्नुपर्छ भनेका छौं । सद्भावसहितको समृद्ध टीकापुर हाम्रो परिकल्पना हो । हामीले हाम्रो घोषणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सबै वडालाई चक्रपथमा जोडने, टीकापुरलाई केन्द्र पर्ने खक्रौला नाकालाई प्रदेश ६ र ७ को मुख्य नाका बनाउने, टीकापुरलाई पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जोडने, स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने, ढल निकास गुरुयोजना, वाटर ट्रिटमेन्टसहितको ल्याण्डफिल साइट, प्लाष्टिक मुक्त सफा शहर, छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण, ओपेन स्पेशलाई बहुउद्यानका रूपमा विकास गर्ने, मुक्त कमैया, बाढीप्रभावित, सुकुम्वासीलाई जनता आवास कार्यक्रमबाट घरआवासको व्यवस्था गर्दै टीकापुरमै रोजगारीको व्यवस्था, महिला बालबालिका, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, महिला हिंसा मुक्त शहर बनाउने, युवालाई लागूऔषधबाट जोगाउने, हरेक खेलका लागि खेलकूद मैदान, हरेक वर्ष खेल प्रतियोगिता र टीकापुरमा स्पोस्र्टस एकाडेमी बनाउने योजना छ । भिन्न क्षमता भएका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछु । टीकापुर अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्ने, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटलाई स्नात्तकोत्तर तहको शिक्षा दिने प्रवन्ध मिलाउने भनेका छौं ।
यसैगरी, एकीकृत सम्पत्ति करको समायोजन, ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणको व्यवस्था, टीकापुरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पार्कको विस्तार, डल्फिन संरक्षण योजना, टीकापुर भ्रमण वर्षको व्यवस्था, विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने, राजी, वादी, दलित, थारू, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृति दिने, कृषि प्रवद्र्धन गर्न विउविजन सुपथ पसल, भूउपयोग नीति बनाई कृषि योग्य भूमि सुरक्षित गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउने, हरेक वडाका नागरिकको गुनासा सुन्ने र पारदर्शी व्यवहार गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । संसारका समृद्ध शहरसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गने, हरेक वडामा फ्रि वाईपाई जोन, सूचना प्रविधिको अध्यापन, नेपाली र थारू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, निजी गैरसरकारी क्षेत्रसंग साझेदारी रहनेछ ।
– २०७२ भदौको घटनाको असर अझै बाँकी छ अबको निर्वाचनमा यसको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ?
टीकापुर घटनाको दोषी को हो, योजनाकार को हो भन्ने कुरा जनताले बुझि सकेका छन् । टीकापुर घटनामा नेकपा (एमाले) को कुनै दोष छैन । घुसपैठ भयो, हाम्रो संलग्नता छैन भन्नेहरूले टीकापुर घटनालाई अपराधिक घटनाका रूपमा बढाए । उनीहरूले राजनीतिक कार्यक्रम गरे । जातीय कुरा अगाडि बढाए । समाजमा विखण्डनको कुरा ल्याए । घटना गरे । पछि उनैले यो अपराधिक घटना हो भने । म भन्छु यो जसले आयोजना गर्‍यो उसले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आयोजकले त्यति बेलै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो । उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी नलिदा, यो आपराधिक घटना हो भनिरहँदा राज्यले अपराधि खोज्ने क्रममा व्यक्ति व्यक्तिमा पुग्यो । व्यक्ति पक्राउ परे । त्यसो हुनाले यो घटना राजनीतिकरण भन्दा अपराधिकरण हुन पुग्यो । यसमा एमालेको के दोष ? हामीले देख्यौं त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता संलग्न छन् । कांग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंह बोलेका छन् । जनतालाई उत्तेजित बनाउने भाषण गरको छन् । यस्तै कुरा मधेशवादी दलका नेताले बोले । अहिले कुनै एजेण्डा नभएका नेपाली कांग्रेस, फोरमहरू जातीय कुरा उठाएर समाजलाई क्षतविक्षत गर्न थालिरहेका छन् । समाज भाँडीरहेका छन् । यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? यो सबै समुदायले बुझ्नुपर्छ । जनताले यो घटनाको योजना बनाउने, जनतालाई उत्तेजित पार्नेलाई चिनेका छन् ।
– टीकापुर घटना बहुसरोकारवाला मुद्दा बनेको छ, यसको असर यहाँका जनताले भोगिरहेका छन् एउटा जिम्मेवार पार्टीको नाताले एमालेको भूमिका के रह्यो त ?
हामी त हिजैदेखि भनिरहेका थियौं घटनाको नैतिक जिम्मेवारी आयोजकले लिनुपर्छ । यहाँहरूलाई थाहै होला हिजो द्वन्द्वकालमा सयौ प्रहरी मरे, कति सर्वसाधारण मरे यसको जिम्मेवारी माओवादीले लिन्थ्यो । यसरी जिम्मा लिदा राजनीतिकरण हुन्थ्यो र राजनीतिसंग जोडिएको कुरा राज्यले राजनीतिक रूपमा हल गथ्र्यो । यहाँ त्यसो नहुँदा अपराधिकरण भयो । मानवअधिकारका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । हामीले पहिल्यै भनेका छौं मान्छे मार्ने अधिकार कसैलाई छैन । दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ तर राजनीतिक आस्थाका हिसाबले कोही जेल जानु हुँदैन । विना कारण थुनामा परेका व्यक्ति छुटनुपर्छ । सम्पत्ति गुमाएका व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । हामीले हिजो पनि यही भनेका थियौं । आज पनि त्यही भन्छौं भोलि पनि त्यही भन्ने छौं यो कुरा नेकपा (एमाले) प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, टीकापुर नगर कमिटीले विज्ञप्ति मार्फत नै सार्वजनिक गरिसकेको हो । यसका साथै क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने सवालमा, थुनामा परेका व्यक्तिको छानविन गरी निर्दोष छुटाउने कुरामा भएका स्थानीय पहलमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सहयोग नै भइरहेको छ ।
– नेकपा (एमाले) ले मधेशी, थारूका मागहरू प्रति बेवास्ता गर्‍यो खासगरी तराई मधेशमा दुई प्रदेशसहितको संविधान संशोधनप्रति सहानुभूति देखाएन भन्ने गरेका छन् नि ?
यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो देशको पुन:संरचना कसरी गर्ने भन्दा सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषीका माग देखिए । कतिपय क्षेत्रीय, जातीय रूपमा देखिए यी स्वभाविकै हुन । कैलालीमा देखिएका थरुहट आन्दोलन, अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन पनि यसैका प्रतिबिम्ब हुन् । मलाई के लाग्छ भने प्रजातन्त्रमा आफ्ना मागहरू, कुराहरू राख्ने अधिकार सबैलाई छ । थारूहरूले पनि आफ्ना पहिचानका रूपमा राखे । नेकपा (एमाले) को सन्दर्भमा भनिरहदा हामीले अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै सुदूरपश्चिमलाई मात्र अलग राख्नुपर्छ भन्ने आधारमा होइन देशमा एउटा जातीय आन्दोलन भइरहँदा देशलाई जातका आधारमा टुक्राटुक्रामा विभाजन गरिनु हुँदैन हामी एक सय २५ जातका मानिस बस्ने, एक सय २३ भाषा बोल्ने देशमा जातका, भाषाका आधारमा विभाजन संभव छैन भनेका हौं । अहिले राज्यको पुन:संरचना गर्दा पनि हिजो माओवादीले भनेजस्तो जातिका कुरा, अरु दलले उठाएका क्षेत्र, भेगका कुरा संविधानको कुनै ठाउँमा संवोधन भएजस्तो लाग्दैन । किनकि त्यो संभव थिएन छैन । जातका आधारमा, धर्मका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा विभाजन यो देशमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अहिले हामी भन्दैछौं : यो देश बहुभाषिक छ, बहुधार्मिक छ, बहुसाँस्कृतिक छ यो देशमा धेरैजातका मानिसहरू बस्छन यसलाई साझा फूलवारीकै रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ नेकपा (एमाले) को धारण यही हो । क्षणिक लाभका लागि देशकै कुभलो हुने कुरा एमालेले गर्दैन । सबैको भलो हुने कुरामा एमाले पछि हटदैन साथ दिन्छ । एमालेले जात विशेष भन्दा लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गर्ने, वर्ग समुदायको हितमा काम गर्ने, विकास समृद्धिको एजेण्डा बोकेको समाजवादी पार्टी हो ।
– अहिले टीकापुर नगरपालिकाको भूगोल फैलिएको एमालेले जितेमा सबैक्षेत्र समेटने योजना कसरी पूरा हुन्छ ?
हामीसंग स्पष्ट खाका छ । हामीले घोषणापत्र, प्रतिवद्धता पत्रमा धेरै कुरा सार्वजनिक गरेका छौं । यहाँ डुवान, तटबन्ध मुक्त कमैंया, बाढीप्रभावित सुकुम्वासीका समस्या छन् । यी सबै समस्याको समाधान गर्न हामीले शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने, कृषिमा के गर्ने ? विकासमा के गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा जनतामा प्रतिवद्धता पुर्‍याएका छौं । जनताले मूल्यांकन गर्नेछन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
– ४२ प्रतिशत थारू बसोबास भएको थारू समुदायको प्रतिनिधित्व उम्मेदवारीमा झल्किन्छ ?
अवश्य झल्किन्छ । वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । १२ जना थारू साथीहरू सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवार हुनुहुन्छ । दलित साथीहरू हुनुहुन्छ । जनजाति उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एमालेले सबै जातजातिलाई समायोजन हुने गरी उम्मेदवार बनाएको छ । सबैलाई मिलाएर जान्छ ।
– एउटा पार्टीको उम्मेदवारको नाताले आम मतदातालाई तपाईको केही भन्नु छ ?
हामी राज्यको पुन:संरचना पश्चात स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा गएका छौं । धेरैर्ले हिजैको जस्तो निकायको निर्वाचन बुझेका छन् । म के भन्छु भने हिजो सिंहदरवारले गर्ने, जिल्लाले गर्ने काम अब नगरपालिका, वडाले गर्ने हो । यो निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छान्दा, भोट हाल्दा सबै उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस् । उम्मेदवारहरूको विगतलाई हेरिदिनुहोस् । उम्मेदवारको स्वच्छतालाई उम्मेदवारको समाजप्रतिको लगावलाई हेरिदिनोस् । उम्मेदवारको उर्जालाई हेरिदिनुहोस् । नेकपा (एमाले)ले वडावडामा, नगर प्रमुखमा, उपप्रमुखमा उर्जाशील स्थापित व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसर्थ नेकपा एमाले पक्षमा मतदान गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध छ । टीकापुरको सन्दर्भमा हिजो सबैलाई मत दिइसकियो । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई मत दिइसकियो । २०६४ सालमा माओवादीलाई मत दिइसकियो । २०७० मा फोरमलाई मत दिइसकियो । यसपाली नेकपा (एमाले) लाई पनि मत दिएर जनताको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्न चाहान्छु । निर्वाचनमा जनता न्यायधिश हुन यसपाली एमालेको सूर्य चिन्हमा मत दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईले दिएको मतले नगरबासीमा सुख र समृद्धि पुर्‍याउने प्रतिवद्धता गर्दछु ।